यी ७ गुण हुने पुरूषप्रति छिट्टै आकर्षित हुन्छन् युवती, तपाईमा पनि छ की ? | सुदुरपश्चिम खबर
यी ७ गुण हुने पुरूषप्रति छिट्टै आकर्षित हुन्छन् युवती, तपाईमा पनि छ की ?
Shot ofahandsome young man looking at his face in the mirror at home
हरेक महिलाको चाहना हुन्छ आफ्नो पुरुष पार्टनरमा राम्रो खुबी होस भन्ने । पुरुषहरुको केही गुणहरुकै कारण महिलाहरु उसप्रति आकर्षित हुने गर्दछन् ।
यो स्वाभाविक र दुनियाको सर्वमान्य कुरा पनि हो । महिला वा केटीहरुलाई पुरुषको कुन कुराले बढी आकर्षित गर्दछ भनेर थुप्रै अध्ययन अनुसन्धानहरु समेत भएका छन् । बिभिन्न अन्तराष्ट्र्रिय सञ्चार माध्यमहरुमा यसबारेमा खबरहरु पनि प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।
विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा हामीले यहाँ पुरुषका ती ७ खुबी वा गुणहरुका बारेमा चर्चा गर्दै छौँ जसका लागि महिला वा केटीहरु निकै आकर्षित हुन्छन् ।
१) महिलाहरुलाई त्यस्ता पुरुषहरु बढी मन पर्ने गर्दैछ जसको सेन्स अफ ह्युमर राम्रो हुन्छ । यस्ता पुरुषहरु आफू खुसी हुनुका साथै नजिकका अरुलाई पनि खुसी राख्ने क्षमता राख्दछन् । त्यसैले यसखालका गुण भएका पुरुषहरु प्रति महिला वा केटीहरु निकै आकर्षित हुन्छन् ।
२) एक अनुसन्धानबाट यस्तो निष्कर्ष आएको छ । जुन पुरुषमा जनरल नलेज राम्रो हुन्छ त्यस्ता पुरुषहरु प्रति पनि महिलाहरु बढी आकर्षित हुन्छन् । महिलाहरु यस कुरामा यस कारण पनि विश्वास गर्छन् की यस्ता पुरुषहरुले साना साना कुराहरुमा ध्यानदिन्छन् जसका कारण पारिवारिक झगडा हुँदैन ।
३) संवेदनशीलता महिलाले पुरुषमा खोज्ने अर्को महत्वपूर्ण गुण हो । अध्ययन अनुसार महिलाहरुको धारणा यो हुन्छ की संवेदनशील पुरुषहरुको दिल साफ हुन्छ । उनीहरु चोखो मायाँ र विश्वास गर्छन् ।
४) सहयोगी भावना र ब्यवहार भएका पुरुषहरुप्रति पनि महिलाहरु निकै आकर्षित हुने अध्ययन रिपोर्टमा बताइएको छ । यस्ता पुरुषहरुले महिलाहरुको सम्मान गर्न जानेका हुन्छन् । उनीहरु महिलाहरुको समस्यामा सहयोग गर्न कहिल्लै पनि पछि हट्दैनन् । तपाईहरुले ध्यान दिनु भएको पनि छ होला चलचित्रका कहानीहरुमा पनि त यस्ता दृष्यहरु प्रष्टैसँग देखाइएका हुन्छन् ।
५) यो कुरा सुन्दा तपाई अचम्म र सामान्य पनि लाग्दछ होला अध्ययन भन्छ जुन पुरुषहरुले राम्रो खाना बनाउन जानेका हुन्छन् त्यस्ता पुरुषहरुप्रति पनि महिलाहरु बढी आकर्षित हुने गर्दछन् । रिसर्चका क्रममा करिब ८० प्रतिशत महिलाले यो कुरा बताएका छन् ।
६) इमान्दार पुरुषहरुप्रति पनि महिलाहरु आकर्षित हुन्छन् । छलककट गर्ने पुरुषहरु महिलाले मन पराउँदैनन् । हरेक महिलाको चाहना हुन्छ उसको जीवनसाथी वा पुरुष पार्टनर इमान्दार होस् भन्ने ।
७) विश्वास अर्को कुरा हो जसले महिलाहरुलाई आकर्षित गर्दछ । कुनै पनि सम्बन्ध दीगो बन्नका लागि आवस्यक पर्ने कुरा भनेकै विश्वसनीयता हो । महिलाहरुले सम्बन्ध जोड्नु पहिले पुरुषको विश्वसनीयता पनि हेर्ने गरेका हुन्छन् । नयाँ पुस्ता बाट सभार
आज कार्तिक ०६ गते शनिवार महारूद्र बाबाको दर्शन गरी हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल !!